इम्यूनिटी पावर कमजोर भए को’रोनाको धेरै जो’खिम , यी ७ चीज अनिवार्य खानुहोस् बड्छ इम्यूनिटी पावर ! – Halkhabar kura
इम्यूनिटी पावर कमजोर भए को’रोनाको धेरै जो’खिम , यी ७ चीज अनिवार्य खानुहोस् बड्छ इम्यूनिटी पावर !
खानपानमा ध्यान नदिंदा इम्यूनिटी पावरमा कमी आउँछ ।अहिले केही रिपोर्ट्सहरूले इम्यूनिटी पावर कमजोर भएकाहरूलाई को रोना भाइ रस संक्र म णको ख’तरा बढी हुने जनाइरहेका छन् । खानपानमा विशेष ध्यान दिंदा इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार इम्यूनिटी पावर बढाउनका लागि खानामा केही विशेष परिकार समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
Previous नेपाल आइडल सिजन ३’को फाइनल भदौ १२ गते हुँदै, को होलान् विजेता ?
Next चितवनमा थप ५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि